အောက်တိုဘာ(၂) #ကျွန်ုပ်ရဲ့ကိုယ်စောင့်သကြား | Radio Veritas Asia
Memorial of the Holy Guardian Angel
ဘဝမှာ စိုးရိပ်ပူပန်ဖူူးသလား။ ကြောက်ဖူးသလား။ သောကတွေနဲ့ စိတ်နာဖူးသလား။ တကယ်တော့ ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘယ်တော့မှ မမေ့ပါဘူး။ စိတ်ထိခိုက်အောင်လည်း လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး ဆိုတာ လူတိုင်းယုံကြည်နိုင်တယ်။ ဘဝမှာ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု၊ ပူပန်သောက တွေနဲ့ တွေ့ကြုံနိုင်ပေမယ့် ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့ကို စောင့်ရှောက်ဖို့ ကိုယ်စောင့်သကြား (သကြားတမန်) တစ်ပါးစီကို အမြဲတမ်း တာဝန်ပေးထားပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲ မှာ "သင်တို့သည် ဤသူငယ် တို့တွင် တစ်ဦး ကိုမျှ မထီမဲ့မြင်မပြုမိစေရန် သတိပြု ကြလော့။ အကြောင်း မူကား သင်တို့အား ငါအမှန် ဆိုသည်မှာ ဤ သူငယ်တို့၏ ကောင်းကင် တမန်တော်တို့သည် ကောင်းကင်ဘုံရှင် ငါ့ခမည်းတော်ကို အစဉ်မပြတ်ဖူးမြော် လျက် ရှိကြ၏။" (မာတေဦး ၁၈း၁၀)
The word "Angel" means messenger. They know us, mediate God's grace to us, care for us and desire deeply that we become holy.
သကြားတမန်က သတင်းကောင်းပါးပေးတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ သန့်ရှင်းစွာနေနိုင်ဖို့ ဘုရားသခင်ရဲ့ အမိန့်တော် ပြန်ပေးပါတယ်။ ကိုယ်စောင့်သကြားကနေ ကျွန်ုပ်တို့အား ဘေးရန်အပေါင်းကနေ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးတယ်။ ဆုတောင်း ပေးတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုတော်ကို ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် လမ်းပြပေးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နေ့စဉ်အသက်တာမှာ သစ္စာရှိရှိနဲ့ ဘုရားရဲ့ရှင်အလိုတော်ကို ဆောင်ရွက်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အတွင်းစိတ်ကနေ အားပေးလှုံ့ဆော်တယ်။
ဒါကြောင့် မနက်ဆုတောင်းမေတ္တာထဲမှာ ကိုယ်စောင့်သကြားအား ပြုအပ်သော မေတ္တာ “ဘုရားရှင်က အမိန့်တော်ရှိ၍ အကျွန်ုပ်ကိုစောင့်သော သိကြား၊ အကျွန်ုပ်အား နေ့ညမပြတ် ဆုံးမသွန်သင် ကြည့်ရှုစောင်မ နော်မူပါ။" အာမင်။ လို့ ဆုတောင်း ကြပါတယ်။ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် သကြားတမန် တစ်ပါးစီကို စေလွှတ် စောင့်ရှောက်မှုပေးအတွက် ဘုရားရှင်ကို ကျေးဇူးတင် ချီးမွမ်း ကြပါစို့။
ကောင်းကင်တမန်များ၏ကဏ္ဍသည်ဓမ္မဟောင်းကာလ၌ဖြစ်စေ၊ ဓမ္မ သစ်ကာလ၌ဖြစ်စေအလွန်အရေးပါလှပါသည်။ ထိုခေတ်နှစ်ခေတ်ကို ယှဉ်ကြည့်မည်ဆိုပါ ကကောင်းကင်တမန်များ၏ ကဏ္ဍသည်ဓ မ္မဟောင်း ၌ပိုများပြီး၊ ဓမ္မသစ်ကာလအထူးသ ဖြင့်ယေဇူးသခင်သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေ စဉ်ကာလ၌ကောင်းကင်တမန်၏၏ကဏ္ဍသည်အ လွန်နည်းပါးပါသည်။ ယေဇူးသခင်ရက်လေးဆယ်ကြာဝါရှောင်၊ ဆုတောင်းခြင်းပြီးဆုံး သွား သောအခါကောင်းကင်တမန်တော်များ၏ပင့်ဆောင်ခြင်းခံရသည့်အ ကြောင်းကိုသာ တွေ့ရှိရပြီး၊ ကျန်ရှိသောအချိန်များတွင်ကမ္ဘာကုန်လျင်ဖြစ် လာမည့်အခြေအနေများနှင့် စပ်လျင်း၍မိန့်ကြားသွားသည်ကိုသာဖတ် ရူ့ ရမည်ဖြစ်သည်။ (ရှင်မာတေဦး ၁၃း၃၉၊ ၄၁၊ ၄၉၊ ၁၆း၂၇၊ ၁၈း၁၀၊ ၂၂း၃၀၊ ၂၄း၃၁၊ ၂၅း၃၁၊ မာကု ၈း၃၈၊ ၁၂း၂၅၊ ၁၃း၂၇၊ ၃၂၊ လုကာ ၂း၁၅၊ ၄း၁၀၊ ၉း၂၆၊ ၁၂း၈၊ ၉၊ ၁၅း၁၀၊ ၁၆း၂၂၊ ၂၀း၃၆၊ ၂၄း၂၃၊ ယော ဟန် ၁း၅၊ ၂၀း၁၂၊ ယေဇူးသခင်ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွ သွားပြီး နောက်၊ တပည့်တော်တို့၏သာ သနာပြုသည့်ကာလ၌မူ တဖန်ပြန်လည် အားကောင်းလာသည်ကိုလည်းဓမ္မသစ်ကျမ်း စာ၌တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ အတူယေဇူးသခင်ကကလေးသူငယ်များအားစောင့်ရှောက် သောကောင်း ကင်တမန်များသည်ဘုရားသခင်၏ (တမန်တော် ၅း၁၉၊ ၆း၁၅၊ ၇း၃၅) တို့တွင်ဖတ်ရူ့တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
စက်တင်ဘာလ (၂၉) ရက်နေ့၌ကောင်းကင်တ မန်တော်ချုပ်သုံး ပါးဖြစ် သည့်မီကာအဲလ်၊ ဂါဗြီအဲလ်၊ ရာဖအဲလ်တို့၏ပွဲနေ့ကိုအမှတ်ရ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ကောင်း ကင်တမန်များသည်ထမ်းဆောင် ရသောအ မူတော်ပေါ်မူတည်၍အခေါ်အဝေါ်ကွဲပြားကြပါ သည်။ အမူတော်အပေါ် မူတည်၍ကောင်းကင်တမန်တော်အဖွဲ့(၉) ဖွဲ့ရှိပါသည်။ ၄င်းတို့ မှာ ၁) ဆေရာဖင်၊ ၂) ခေရူဗင်၊ ၃) ပါဝါ၊ ၄) ထရုမ်း၊ ၅) ဒိုမိးနီယံ၊ ၆) ဗားချူ၊ ၇) ပါရင်းစီ ပယ်၊ ၈) အိန်ဂျဲယ်လ်၊ ၉) ကောင်းကင်တမန်ချုပ်တို့ဖြစ်ပါသည်။
စက်တင်ဘာလ (၂၉) ရက်နေ့က၊ ကောင်းကင် တမန်တော် ချုပ် (၃) ပါး၏ပွဲနေ့ကို၊ အမိအသင်းတော်က ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ယနေ ့အောက်တိုဘာ (၂) ရက်နေ့ဍ်လည်း၊ တဖန်လူတို့အားစောင့်ရှောက် မူ ပေးနေသော၊ ကောင်း ကင်တမန်တော်များ၏ပွဲနေ့ကိုကျင်းပပါသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာဍ်၊ ကောင်းကင်တမန်တော်ချုပ်မီကာအယ်ကို၊ အစီ ရာအဲလ်လူမျိုးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သော၊ ကောင်းကင်တမန် အ ဖြစ်၊ သတ်မှတ်ပြီး၊ ကောင်းကင်တမန်များကိုမူယုံ ကြည်ခြင်း၏၊ ဘိုးဘေး များအား၊ ကာကွယ်ပေးသူများအဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါသည် (ထွက်မြောက် ရာကျမ်း ၂၃း၂၀-၂၃)။ ဧဝဂေလိကျမ်းစာဍ်လည်း၊ ခရစ်တော်သခင် ကိုယ် တိုင်၊ အချို့သောကလေးသူငယ်များ၏၊ ကိုယ်စောင့်ကောင်းကင်တ မန် တော်များကို၊ ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါသည် (မာတေဦး ၁၈း၁၀)။
ကျမ်းစာတော်လာအထောက်အထားများအရ၊ ကောင်းကင်တမန်တော် (၉) အုပ်စုရှိကြောင်းမှတ်သားရပါသည်။ ထိုအုပ်စုမျာမှာ
၁. ဆေရာဖင် (Seraphim) - အီဇအီးယား၆း၂-၇
၂. ခေရူဘင် (Cherubim) - ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃း၂၄၊ ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၂၅း၁၈-၂၂
၃. တရုမ်း (Thrones) - ကော်လောဆေး ၁း၁၆
၄. ဒိုမီနေးရှင်း (Dominations) - ကော်လောဆေး ၁း၁၆
၅. ဗာ(လ်) ချု (Virtues) - တမန်တော်၀တ္ထု ၁း၁၀
၆. ပါဝါ (Power) - ကော်လောဆေး ၁း၁၆၊ ဧဖက် ၆း၁၂၊ ရောမ ၈း၃၈-၃၉
၇. ပရင်းစီပါးလီတီ (စ်) (Principalities) - ဧဖက် ၆း၁၂၊ ၂း၂
၈. ကောင်းကင်တမန်တော်ချုပ် (Archarangels) ပသက်သာလောနိ ၄း၁၆၊ ဒါနီအဲယ် ၈း၁၅၊ ၉း၂၁၊ လုကာ ၁း၁၁၊ ၂၆၊ တိုဘိ ၁၂း၁၂၊ ၁၅
၉. ကောင်းကင်တမန်တော်များ (Angels) - ကျမ်းစာသာဓကများစွာတွင်တွေ့ရပါသည်။
ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီးပေါလ်ဂရောင်၏ စျာပနအခမ်းအနား တွင် ရန်ကုန်ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး ကာဒီနယ်ချားစ်ဘို ၏ သြဝါဒတရားတော်
ဖာသာရ် ပါစကား သီကိုရှင်း ၃၀ ကြိမ်မြောက် သာမာန် ရက်သတ္တပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ဩဝါဒ အောက်တိုဘာလ ၂၅၊ ၂၀၂၀
ကာဒီနယ်ချားလ်စ်ဘို ၏ (၃၀ )ကြိမ်မြောက်သာမန်တနင်္ဂနွေ ဩဝါဒ